Esi mepee HTC One M8 n'efu na S-Gbanyụọ | Gam akporosis
Na nkuzi ọzọ, ekele dịrị ndị ọrụ XDA ọzọ, aga m egosi gị usoro ị ga - eso nweta free HTC One M8 kpọghee, ọ bụ ezie na iji nweta ya anyị aghaghị nwere ọdụm gbanyere mkpọrọgwụ tupu ya na ya S-OFF emeela.
Banyere mgbọrọgwụ nke ngwaọrụ ahụ, ahapụlarị m gị njikọ nke nkuzi nke m bipụtara n'oge gara aga ma ọ dị mfe ịgbaso. Usoro S-Off nke ga-emeghe bootloader nke ọnụ anyị, m ga-akọwara gị ya n'okpuru ebe ọ bụ ihe mbu anyi gha eme otu ugboro gbanyere mkpọrọgwụ.
1 Otu esi enweta S-Off na HTC One M8
2 Etu esi kpughee HTC One M8 n’efu
Otu esi enweta S-Off na HTC One M8
Ọ dị mkpa nwere Bootloader unlocked tupu ịga n'ihu na nkuzi a, na nke a biputere ị ga - ahụ ntuziaka niile iji nweta ya ngwa ngwa Na ntinye ole na ole, na mgbakwunye na vidiyo a, m na-akọwa ọrụ nke HTC Dev.
Ntuziaka nke ihe niile m na-akọwa maka S-Gbanyụọ Esi m n’ebe a nweta ha, yabụ ka anyị rụọ ọrụ:
Nke mbụ niile ga-hụ na nwere ndị ọkwọ ụgbọala HTC arụnyere na PC nke anyị ga-arụ ọrụ, a ga-emerịrị ma ọ bụrụ na ịmekọrịtala ma jikọọ HTC One gị na PC.
Nwee Gam akporo ADB arụnyere na PC anyị, maka nke a ọ dị mkpa budata gam akporo SDK dị ka sistemụ arụmọrụ anyị.
Maka usoro a ọ dị mkpa ịnwe njikọ Internetntanetị kwụsiri ike na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, ọ nwere ike ịbụ site na Wi-Fi ma ọ bụ data mana ọ ga-arụ ọrụ zuru oke.
Mkpebi USB nyeere site na ntọala HTC One M8.
Lockdị mkpọchi niile nwere nkwarụ, mkpọchi ọnụ enweghị ike ịbụ n'ụkpụrụ, swipe, paswọọdụ ma ọ bụ ihu mkpọghe ihu, ọ ga-abụrịrị ọnọdụ ya ọnweghị.
Anyị ga-ewepụ HTC Sync software na PC anyị, nke a dị ezigbo mkpa na ọ gaghị ezuru iji mechie ya, ọ dị mkpa iji kpochapụ mmemme ahụ.
Ihe ngwanrọ ọ bụla iji mekọrịta ọnụ ọnụ gam akporo, pịnyere Samsung Kies, PDA Net, wdg, wdg ga-enwe nkwarụ kpamkpam ma ọ bụrụ na enwere ike iwepụ ya kọmputa iji gbochie malfunctions nke usoro S-Off.
Jiri USB 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri jikọọ HTC One M8 via USB.
Ozugbo emere ihe a niile, anyị na-ebudata Firewater site na otu njikọ a na ihe anyị na-emezu dị ka ndị nchịkwa sistemụN'ezie, HTC One na-ejikọ ya na PC tupu.
Anyị kwesịrị ịhụ a windo iwu ebe anyị ga-agbaso ntuziaka ndị akọwapụtara anyị nke ọma, ntuziaka ndị nwere oke inye ikikere ogbugbu nnabata ọnọdụ ndị ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ụdị njehie ọ bụla na mmezu nke S-OFF, ana m akwado ka ị gafee isi iyi m hapụrụ ntakịrị elu ebe ọ bụ na e nwere ụzọ ndị ọzọ maka ụdị ndị ọzọ.
Etu esi kpughee HTC One M8 n’efu
Iji nweta kpọghee HTC One M8 n'efu ma nwee ike iji ya ụlọ ọrụ ekwentị ọ bụla, anyị ga-ezu na gafee peeji a ma soro ntuziaka m zuru ezu n'okpuru:
Na keyboard nke ekwentị anyị ka anyị pịnyere 06 # ma anyị dee ọnụ-ọgụgụ nke anyị IMEI n’enweghi ihe ojoo.
Anyị dejupụtara akwụkwọ nyocha nke ibe weebụ m jikọtara na gị ma ziga ya (Lee nseta ihuenyo n'elu).
Anyị ga-enweta faịlụ nhazi site na mail, config.dat na anyị ga-Tapawa na mgbọrọgwụ nke ebe nchekwa dị n'ime nke HTC One M8.
Ugbu a, anyị malitegharịrị na ọnọdụ HBOOT, họrọ nhọrọ SimLock ma kwado ya na Ike.
N'oge ahụ ekwentị ga-achọpụta faịlụ config.dat na ga-kpọghee ekwt ga-eji ụlọ ọrụ ọ bụla, si otú ahụ kpọghee HTC One M8 kpamkpam n'efu. ¿Etu ị ga-esi mara ma ekwentị gị anaghị akwụ ụgwọ?
Mgbe usoro ahụ gwụchara, anyị ga-enwe ike ịpụ AKWOTKWỌ ịpị igodo olu elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Otu esi enweta S-Off na otu ị ga-esi kpọghee HTC One M8 n’efu
hello olee otu ị si enweta ọnọdụ HBOOT?
Zaghachi Oscar Sanchez
Ndewo, m zụtara htc agbachi, ọ bụ akara verizon (USA) ma amalitere m maka telcel (mexico), ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, agbanyeghị ọ ka na-echekwa ngwa ngwa ụlọ ọrụ Verizon, enwekwara m nsogbu na «ebe dị ọkụ »Ọ na-agwa m na iji jiri ebe dị ọkụ (ịkekọrịta ịntanetị) ọ dị mkpa ịnwe mgbawa verizon, ajụjụ m bụ, ọ bụrụ na m gbanye ekwentị m htc M8, enwere ike iji ya dị ka ebe dị ọkụ? Daalụ n'ọdịnihu.
Nzaghachi ka ọ ghara ịza Gonzalez
Ndewo Walter, otu ihe ahụ na-eme m… uld nwere ike idozi nsogbu ahụ?
Ọbụna m Sprint htc one m8 anaghị amata SIM m
Alberto, ị nwere ike kpọghee Sprint Htc gị?
Dbụ Shad dijo
Ọ dị mma, ọ bụrụ na m nwere ike ịme Sprint HTC mara m telcel SIM, naanị m setịpụrụ ya ka ọ chọọ netwọk ahụ na akpaghị aka, naanị igwefoto azụ ya kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọ dị onye maara ihe kpatara ya ??? Ihe ndị ọzọ niile na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Shedru gbanye dijo
Ọ dị mma, ọ bụrụ na m nwere ike ịme Sprint HTC mara m telcel SIM, naanị m setịpụrụ ya ka ọ chọọ netwọk ahụ na akpaghị aka, naanị igwefoto azụ ya kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọ dị onye maara ihe kpatara ya ??? Ihe ndị ọzọ niile na-arụ ọrụ dị ukwuu
Ọnye na -bụ Ricardo Sosa? dijo
Nnọọ, kedu ka ị mere? Enwere m "ewepụtara" m8 sitere na At & t mana ọ ga-amasị m imelite ya, yabụ amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-adị mma ịme usoro a ebe ọ bụ na m nwekwara ya dị ka telcel ma At & t logo na-egosi na mmalite, enwere olileanya na mmadụ nwere ike inyere m aka. Daalụ nke ukwuu
Zaghachi Ricardo Sosa
Enwere m htc one m8 sprint na enweghị m ike ịfụcha ma ọ bụ hapụ ya biko nyere aka
Zaghachi ka omel
Ndewo, achọrọ m enyemaka, enwere m htc m8, ọ bụ t-mobile mana ha hapụrụ m ya, ọ rụtụrụ ọrụ obere oge wee kwụsị inwe akara aka dịka a ga-akọ ya, usoro a ga-enyere m aka, na otu esi abanye ọnọdụ HBOOT, daalụ maka uche gị
Ha nwere ike idozi njikọ Firewater ka ọ na-enweta njehie na enweghị ike ibudata ya.
hello enwere m htc m8 AT&T na m tinye telcel sim na ọ na-ajụ m maka koodu otu m ga esi enweta ya
Zaghachi gustavo agustin barba
Orester Nwachukwu dijo
Ezi ụbọchị na
Ogologo oge ole ka ha na-aza na mail mgbe ha zipụrụ faịlụ config.dat
Zaghachi Orester Flores
Bụrụnụ ndị na-azoputa mmụọ ozi dara ada si n'eluigwe